🥇 ▷ XPG Spectrix D60G DDR4-3600 Faallooyinka: Fantastic Caag ✅
Mid ka mid ah horumarinnada ugu xiisaha badan sanadkii la soo dhaafay (ugu yaraan dib u eegista xusuusta) waa fidinta taageerada xusuusta sare. Horumarradan ayaa si laablaab ah isugu laabmay hoos udhac ku yimid qiimaha xusuusta taasoo DDR4-3600 ka dhigaysa meel ay ka gaadhaan inta badan taageerayaasha waxqabadka. Laakiin maxaa dhacaya haddii aad tahay qof xiise badan oo ku faana? Qaybta ugu xiisaha badan badanaa miyaanay lahayn heerka labaad ama saddexaad ee waxqabadka? Adata waxay aaminsan tahay in macaamiisheeda ay tahay inay yeeshaan munaasabad ayna baxaan, qiimo dhexdhexaad ah. Kumaa ku doodi doona taas?
Awood xad dhaaf ah oo heer sare ah
Awoodda daahsan ee heer sare ah (tunersarka)
Dugsiga Sare ee XMP Wuxuu Kordhiyey Iswaafajinta
Isku day inaad ka dhaadhiciso dadka kale in saxanka kuleylka caaga ahi uu ku habboon yahay
Isticmaalayaasha raba kaliya inay baahiyaan iftiinka baahinta iftiinka ayaa ka heli kara nooca rakhiis Spectrix D60G, laakiin kuwa iyagu sidoo kale doonaya waxqabadka ugu fiican waa inay tixgeliyaan nooca guuleysiga ee xirmada AX4U360038G17-DT60 DDR4-3600 PDR.
Iyada oo daboolaysa muuqaalka buuxa ee suuqa xamaasada dhexe, Adata wuxuu u diray DDR4-3600 nooca XPG Spectrix D60G si uu ula socdo dib-u-eegista DDR3-3000. Alwaaxyada wareegyada, RGB LED-yada (shankiiba dhinac), iyo diffuser-nalka buuxa oo leh xargaha aluminiinta ee qurxinta ayaa weli jira, laakiin tani waa markii ugu horreeysay ee aan ogaanay in diffuser nalka uu yahay kuleylka kuleylka ah ee moodalkan. Dhismooyinka heerkulka dhexdhexaadka ee balaastigga ayaa muujin kara in DRAM IC ee hoosta ka jirta uusan u baahnayn kala-miirid kuleyl, xitaa heer xog sare, inkasta oo balaastig adag sida kuwa Adata halkan loo isticmaalo ay u muuqdaan inay soo saarayaan kuleyl ka fiican qaacidooyinka ka jilicsan.
Nooca DDR4-3600 ee Spectrix D60G ma fududa in waqti la helo, maaddaama ay soo bandhigeyso daahfurnaanta CAS wax ka yar hal wareeg oo loogu talagalay qaddarka xogta 200 MHz kasta. Tani waxay gelineysaa lambarka qaybta AX4U3200316G16-DR80 qeybtayada “Hoose”. Jooga “, sababta oo ah waqtiga haray ee wareegga kasta wuu ka gaaban yahay sababta oo ah inta jeer ee la kordhiyo.
Isticmaalayaasha ogaada ka dib iibsashadooda in aaladdoodu aysan taageerin xawaarahaan (badiyaa kuwa aan sameeyn karin Intel Intel iyo / ama chipsets taxanaha B / H) wali waa lagu soo dhaweynayaa muuqaalka hoose ee ‘DDR4-2666 C16’, iyo xitaa adeegsadayaasha leh boodhadhka hooyada. ha taageerin XMP wuu isticmaali karaa dejinta DDR4-2666 C19 ama C20. Sababta XMP-2666 waqtiyada la’aanta ayaa ah in astaanta guud loo qoro DDR4 gundhigga 1, 20V iyo meelaha wax lagu dhejiyo ee aan taageerin heerarka sare ee xogta ayaa wali gacantooda lagu hagaajin karaa kuwa raba. Tani waa mid ka mid ah heerarka xogta ee aan dejin doono.
In kasta oo nalalka cad ee loo adeegsado xirmadaan ay go’aansadaan in midabku uusan hodan u noqon doonin sida xirmada Adata D80, waxaa lagu muujiyey labada qololood ee mugdiga ah iyo kiisaska hooska gudaha. Iftiimin ifaya ayaa loo baahan yahay si loo helo sawirro cad oo nasiib darro ka tarjumaya qalabka cad-cad, si loo yareeyo saameynta muuqaalka ee ay indhaheena ku arki karaan si ka wanaagsan qalabkayaga kaamirooyinka.
In kasta oo xirmada kombiyuutarka XPG RGB ee la soo bixi karo ay si wanaagsan ula macaamilayso modules-yadayada, kumama habayn karto xusuusta si ay ugu dhigto iftiinka baalasheena. Tan darteed, waxaan u baahan nahay inaan isticmaalno barnaamijka ‘modat-ka’ RGB motherboard, kaas oo isna u baahan casriyeyn si uu ula shaqeeyo RGB Spectrix D60G. Waxaan ogaanay in kombuyuutarrada loo yaqaan ‘motherboard’ aysan iskula jaanqaadi karin qaab goos goos ah sida Rainbow, laakiin waxay isweydaarsadaan marka qaabku u egyahay midab adag. Software XPG waxaa ka mid ah xakameynta xawaaraha, sidaa daraadeed adeegsadayaashu waxay awood u leeyihiin inay isku dayaan hagaajinta xawaaraha si ay ugu habboonaan boodhadhka hooyooyinkooda, laakiin sababta ugu wanaagsan ee loo adeegsado waxay tahay in astaamaha midabka LED-ka gacanta lagu dejiyo
Isbarbar dhigga qalabka
Si aan u ilaalino cadaaladda isbarbardhiga maanta, waxaan go’aansanay inaan adeegsanno xirmo leh isla xog isku mid ah iyo tiro qiimeyn ah (u adeegsiga waxqabadka) isla markaana leh isla RGB aasaasi ah (sinnaanta sicirka). Viper RGB Patriot wuxuu bixiyaa waqti yar oo faa’iido ah CAS 16, halka T-Force XCalibur RGB Teamgroup ay leedahay waqti waxyar ka sii xun. Taasi waxay gelineysaa C17 XPG Spectrix D60G dhexda.
Awoodaha xad dhaafka ah ee xusuusta xad dhaafka ah ayaa nagu qasbay inaan doorano MSI X570 Ace oo leh AMD Ryzen 7 3700X oo ah madalkeena tijaabada ah, kuna dhameystir 256GB Toshiba / OCZ RD400 iyo Gigabyte RTX 2070.
Is dhaafsiga iyo Yaraynta Kirada
Laba ka mid ah xirmooyinka isbarbardhigga ayaa yimid DDR4-4333 oo ku yaal mashiinkeenna AMD Ryzen 3000-taxane ah, wax yar oo ka mid ah DDR4-4400-ka cajiibka ah ee aan ku dhammaynay qalabka DDR4-2933 intii lagu jiray dib-u-eegista Motherboard-ka. Adata wuxuu noo soo dhowaaday calaamadda sare, tijaabooyinkayaga xusuusta ayaa soconaya in ka badan 40 daqiiqo DDR4-4400 ka hor intaanan arag qaladkeenna koowaad oo lagu qasbay inaan dib ugu noqonno DDR4-4333.
Dejinta waqtiga ugu deggan ee ugu hooseeya 1.35V (Max) kuna yaal MEG X570 ACE (BIOS 1.20)
AXogta XPG Spectrix D60G
(2x 8GB double rating)
P.atriot Viper RGB 16GB
T-Waxaa XCalibur RGB
(2x 8GB qiimeyn shaqsiyeed) ✗
Tafaariiqda xusuusta leh waa inay soo buuxisaa wax badan oo Samsung B-Die ah, maxaa yeelay waxaan dhahnay in dhammaan saddexda xirmooyin ay adeegsadaan qaybaha hadda-EOL ah. Adata iyo Patriot xitaa waxay ku gaareen isku meel waqti aad u hooseeya, in kasta oo T-Force lagu xushay awoodiisa in ay iska caabin karto isla heerka yareynta latency-ka. CAS 12 waqti dejin ah oo loo habeeyay 1 35V dabcan waxay garaacdaa XDR X60 D60G D60G C60!
Adata wuxuu ka shaqeeyay Patriot ee Sandra’s bandwidth bandwidth wuxuuna xitaa ku dhaleeceeyay isaga inta badan aagagga aan ku isticmaalno Sandra Latency. Waxaan aaminsanahay inay isku mid yihiin. Malaha tilmaamaha ugu yar ayaa noqon doona kuwa ugu yar ee codsiyada dhabta ah?
Ma jiraan wax yar oo laga wada hadlayo F1 2017: in kasta oo tijaabinta heerka xog hoose ay keento in FPS hoos u dhacdo, waxay umuuqataa in saacadda CPU ay go’an tahay 4.20 GHzkeenna wuxuu caqabad yar ku hayaa goobaha aan u maleyneyno inay tahay inay gaaraan 160 FPS. Blender ayaa naga yaabisay iyadoo muujineysa jajab wareeg ah oo labaad ah oo loogu talagalay qalabka Adata isla markaana kor loogu qaadayo qalabka ‘Patriot’, guushii Adata xitaa way fududahay in lagu arko 7-da tijaabo ee ‘Old Zippers’. Xusuusnow in waqti yar oo cadaadis ah ay ka dhigan tahay wax qabad badan.
Waxaan aad ula yaabnay inaan aragno in dhammaan saddexda xirmooyin lagu qiimeeyo si isku mid ah, laakiin xitaa waxaan ka sii yaabnay inaan aragno in xirmada Adata ay si joogto ah u daba gasho waxqabadka sare ee RGB Patriot Viper. Halkan waxaan ka helnaa guul qiimo leh, inkasta oo D60G ay u isticmaasho diffuser caag ah sida “kuleylka kuleylka”. Iyo isku darka waxqabadka sare iyo qiimaha wanaagsan ayaa ku filan in la soo saaro afar xiddigood iyo talooyin xamaasad leh.
Buundada Sawirka: Tom Hardware
DHEERAAD: Xusuus wanaagsan
DHEERAAD AH: TILMAAMADA DRAM DRQ iyo Buugga Dhibaatooyinka
BADAN: dhammaan waxyaabaha xusuusta ku jira